NIYADJAB: Jamaahiirta Barcelona Oo Lumiyay Rajadii Ay Ka Qabeen Philippe Coutinho Iyo In Malcom Uu Ka Fiican Yahay Oo Ay Soo Bandhigeen. - Gool24.Net
NIYADJAB: Jamaahiirta Barcelona Oo Lumiyay Rajadii Ay Ka Qabeen Philippe Coutinho Iyo In Malcom Uu Ka Fiican Yahay Oo Ay Soo Bandhigeen.
Fashilka Philippe Coutinho ee Camp Nou ayaa heer kale oo hoose gaadhay kadib markii uu ku muuq beelay kulankii Catalan Derby ee Espanyol. Ernesto Valverde ayaa markale shaxdiisa ku soo bilaabay Philippe Coutinho laakiin waxa uu awoodi waayay in wax saamayn muuqata ah ku yeesho kulankii adkaa ee uu Messi kooxdiisa labada gool ku badbaadiyay.
Jamaahiirta kooxda Barcelona ayaa hadda quus ka taagan Coutinho waxayna baraha bulshada ku soo bandhigeen in Malcom uu hadda yahay xidiga ka fiican Philippe Coutinho ee ay tahay in Valverde uu shaxdiisa ku soo bilaabo.
Fikrado ay ka bixiyeen taageerayaasha kooxda Barcelona saamayntii uu Malcom ku yeeshay kulankii Espanyol markii uu daqiiqadaha kooban ku jiray iyo xaalada xun ee uu Philippe Coutinho ku soo jiray afartii bilood ee la soo dhaafay ee uu waliba Valverde fursada ka helayay ayaa muujinaysa in niyadjab wayni uu haysto jamaahiirta Barca.
Dhawaan waxaa soo baxay warar sheegayay in Philippe Coutinho uu ciyaartoyda xulka arankiisa Brazil u sheegay in uu tixgalinayo in uu iskaga baxo Camp Nou wuxuuna sababta ugu sheegay in uu yahay go’aan adag balse uu waayihiisa ciyaareed ku badbaadinayo.
Laakiin hadda jamaahiirta kooxda Barcelona ayaa lumiyay rajadii ay ka qabeen in Philippe Coutinho uu maalin uun dib u helayo qaab ciyaareedkii cajiibka ahaa ee uu Liverpool kaga soo baxay, waxayna hadda si cad u doonayaan in Valverde uu Malcom siiyo fursadii uu Coutinho siin lahaa.
Aan soo qaadano qaar ka mid ah fariimihii jamaahiirta Barca ay isku barbar dhigeen xaalada Malcom iyo Coutinho wuxuuna mid ka mid ahi soo qoray: ” Malcom ayaa muujiyay in ku filan daqiiqadahaas intii uu muujiyay Coutinho afartii bilood ee ugu danbeeyay. Isaga talaadada ku soo bilaw”.
Taageere kale oo isla fikrada hore aaminsan ayaa isna soo qoray: “Malcom aya 20 daqiiqo ku sameeyay wax ka badan intii uu Coutinho ku soo sameeyay 2019 oo dhan, waxa uu boos ku soo bilaabasho helay ilaa December ee soo laabashadii Demeble”.
Taageere kale oo Barcelona ay ayaa isna soo qoray: “Malcom ayaa 40 daqiiqo ku abtay in ka badan wixii uu Coutinho ku soo qabtay 15 kulan. Hadda taasi waa halka uu Malcom kaga fiican yahay Coutinho”.
Malcom ayaa daqiiqado kooban oo uu ku jiray kulankii Espanyol waxa uu caawiye ka noqday goolkii labaad ee uu Messi dhaliyay halka Coutinho aanu wax la sheegi karo qaban isaga oo kulankan ku soo bilawday.
Si kastaba ha ahaatee, samirkii iyo dul qaadkii taageerayaasha Barcelona u hayeen Coutinho ayaa hadda u muuqda mid soo dhamaaday taas oo xidiga reer Brazil ku qasbi karta in uu xagaaga iskaga huleelo Camp Nou.